कोरोना शंकास्पद बिरामीको हाल बुझ्न पाटन अस्पताल पुग्दा ...
कहाँबाट आउनुभएको ?
केमा आउनुभएको ?
एम्बुलेन्समा हजुर ।
के गर्नुहुन्छ ?
रामेछापमै पढ्छु ।
ज्वरो कति छ, यसभन्दा अगाडि नाप्नुभएको थियो ?
१०२ भनेर स्वास्थ्यचौकीले भनेको थियो ।
तपाईंलाई के–के भएको छ भन्नुस् त ?
३ दिन अगाडि मलाई अलिअलि खोकी लागेको थियो । तातो पानी र बेसार खाएपछि खोकी लाग्न निको भयो । २ दिन अगाडि फेरि ज्वरो आयो, खोकी पनि लाग्यो । नजिकैको स्वास्थ्यचौकीमा जँचाउन गएको थिएँ, काठमाडौं जानु भन्नुभयो र आज बिहान एम्बुलेन्समा आएको हुँ ।
परिवारका सदस्य कोही विदेश हुनुहुन्छ ?
छैन, सबै घरमै छौं ।
यो संवाद हो पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालिन पाटन अस्पतालका नर्स र त्यहाँ आएका एक बिरामीबीचको ।
२० वर्षीय ती युवक कोरोना भाइरससँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएपछि बुवालाई लिएर ललितपुरको लगनखेलस्थित अस्पतालमा आइपुगेका रहेछन् ।
कोरोनाको डरले त्रसित बन्दै अस्पताल आएका ती युवकसँग यति सोधपुछपछि परीक्षणका लागि रगत निकालियो ।
‘कोरोना हुनसक्छ भनेर स्वास्थ्यचौकीले काठमाडौं जान भनेर पठाएको थियो । पाटन अस्पतालमा बेड खाली छ भन्ने कुरा बाटोमा सुनेपछि यहाँ आएका हौं,’ ती युवकका बुवाले लोकान्तरसँग भने ।
अन्दाजी २६/२७ वर्ष अर्का एक व्यक्ति हातमा रिपोर्ट लिएर लाइनमा उभिएका छन् ।
भारतमा मजदुरी गरेर फर्किएका धादिङका ती युवक कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएपछि पाटन अस्पताल आइपुगेका रहेछन् ।
खकार, रगत लगायत जाँच गराएपछि रिपोर्ट देखाउनका लागि उनी लाइनमा बसेका रहेछन् ।
आफूलाई कोरोना भाइरससँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएपछि परिवारका सदस्यलाई समेत नभनी अस्पताल आएको उनले बताए ।
‘कोरोना भाइरसको जस्तो लक्षण देखिएकाले घरमा कसैलाई पनि नभनी आएको हुँ, रिपोर्ट आएको छ, देखाउँ, के भन्छन्,’ ती युवकले लोकान्तरसँग भने ।
यी त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्, आजभोलि सरकारी अस्पतालहरू पुग्दा रुघाखोकी र ज्वरोका कारण आउनेहरू प्रसस्तै भेटिन्छन् ।
विश्वभर कोरोनाको संक्रमण फैलिएका बेला त्यससँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएकाहरू डराउँदै अस्पताल आउने गरेका छन् ।
पाटन अस्पतालमा ज्वरो र रुवाखोकीका लागि जाँच्ने छुट्टै ठाउँको व्यवस्था गरिएको छ । अन्य समस्या लिएर अस्पताल आउने बिरामीको चाप निकै कम छ ।
बिहीवार मध्याह्न १२ बजे अस्पताल पुग्दा पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्युपमेन्ट (पीपीई) लगाएका एक व्यक्ति औषधि छर्किरहेका थिए ।
शंकास्पद् बिरामीलाई राख्न आइसोलेसन वार्डको पनि व्यवस्था गरिएको छ । आइसोलेसन वार्डमा पीपीई लगाएका डाक्टर, नर्स र सहयोगी गरी ३ जना थिए ।
उनीहरू बिरामीलाई सोधपुछ गर्ने, ज्वरो नाप्ने र परीक्षणका लागि नमूना लिने काम गरिरहेका थिए ।
सामान्य खालको रुघाखोकी र ज्वरो भएको खण्डमा औषधि दिएर र अन्य जाँच गरेर पठाउने गरेको देखिन्थ्यो ।
‘हामीले कोरोनाको लक्षण हो या अन्य समान्य खालको रुघाखोकी भनेर एकिन गरी उनीहरूलाई औषधि दिने वा आइसोलेसनमा निर्णय लिने गरेका छौं,’ पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन अस्पतालका निर्देशक डाक्टर विष्णुप्रसाद शर्माले लोकान्तरसँग भने ।
सामान्य रुघाखोकी र ज्वरोका बिरामीहरू पनि कोरोना हो कि ? कतै कोरोना त लागेको छैन भनेर आत्तिँदै आउने गरेको डाक्टर शर्माले बताए ।
अस्पतालले कोरोनाको लक्षणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण नदेखिएको खण्डमा अन्य औषधि चलाउने र उनीहरूलाई घरमै क्वारेन्टानमा बस्न सल्लाह दिने गरेको शर्माले लोकान्तरसँग बताए ।
यदि कोरोनाको लक्षणसँग मिल्न गएमा उनीहरूलाई अस्पतालको आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्ने गरेको शर्माको भनाइ छ ।
‘हामीले आइसोलेसनमा राखेर चेकजाँच गर्ने वा उनीहरूको रिपोर्ट आएपछि आइसोलेसनमा राख्न आवश्यक नदेखिएमा आवश्यक सल्लाह दिई घरमा क्वारेन्टाइनमा बस्न भनेका छौं,’ शर्माले भने ।
आइसोलेसनमा ३ जना बिरामी
पाटन अस्पतालको आइसोलेसनमा बिहीवार मध्याह्न ३ जना कोरोना शंकास्पद बिरामीलाई राखिएको थियो ।
‘३ जनालाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार गरिरहेका छौं, उहाँहरूको ल्याब टेस्ट भइराखेको छ,’ शर्माले भने ।
कोरोनाको आशंकामा हालसम्म ६ जना बिरामीलाई आइसोलेसनमा राखिएको र त्यसमध्ये ३ जनाको ल्याब टेस्टमा नतिजा नेगेटिभ आएको डाक्टर शर्माले जनकारी दिए । अन्य ३ जनाको भने रिपोर्ट आउन बाँकी छ ।
पाटन अस्पातालमा अहिले आइसोलेसनका ६ वटा बेड राखिएको छ । इन्फेक्टेड बिरामीलाई राख्न १५ वटा बेड तयारी अवस्थामा राखिएको निर्देशक शर्मा बताउँछन् ।
आवश्यक परेको खण्डमा अस्पतालको क्षमताअनुसार आइसोलेसन बेड र इन्फेक्टेड बिरामीका लागि बेड थप्ने योजना बनाइरहेको निर्देशक शर्माले जानकारी दिए ।
उपचारमा ४० जनाको टीम
पाटन अस्पातालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित र शंकास्पदहरूको उपचारका लागि डाक्टर, नर्स र हेल्पर गरी ४० जनाको टीम खटिएको छ ।
७/७ जनाको टीम बनाएर शिफ्टमा खटाउने गरेको निर्देशक शर्माले बताए ।
‘हामीसँग कोरोना शंकास्पद र संक्रमित बिरामीको उपचार गर्न ४० जनाको टीम छ । शिफ्ट मिलाएर ७ जनाको टीमलाई जुनसुकै समयमा पनि तयारी अवस्थामा राख्ने गरिएको छ ।’
पीपीई आफैं उत्पादन
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले अस्पतालका लागि आवश्यक पर्सनल प्रोटेक्टिभ इकुपमेन्ट (पीपीई) आफैं उत्पादन गरिरहेको छ ।
स्वास्थ्यकर्मीको शरीर पूरै छोपिने गरी तयार पारिने पीपीई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको नभएपनि सुरक्षाको हिसाबले राम्रो खालको रहेको निर्देशक शर्माको दाबी छ ।
पीपीई उत्पादनमा सहयोगी दाता समेत खोजी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
कोरोनाको त्रास जताततै छ । नेपालमा हालसम्म ३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
विश्वभरमा यसका संक्रमितको संख्या साढे ५ लाख पुग्न लागेको छ भने मृतकको संख्या २४ हजार नाघिसकेको छ ।
नेपालमा कोरोनाको दोस्रो संक्रमण पुष्टि भएपछि मंगलवारबाट लागू हुने गरी सरकारले १ साताका लागि लकडाउन घोषणा गरेको छ ।